दीपेन्द्र राई | Ratopati
प्रकृतिलाई धन्यवाद दिँदै यसरी मनाइन्छ मंसिरे पूर्णिमा (उँधौली) access_timeपुस ७, २०७५
चोलिया सिउनु कुमकुमको भेट भयो आज थुमथुमको यतिबेला किराती समुदायको सघन बसोबास रहेको नेपालका पूर्वी जिल्लामात्रै होइन, हङकङ, बेलायत, ब्रुनाई, अमेरिका, जापान, दुबई, कतार, साउदी अरब, मलेसिया र भारतको सिक्किम, दार्जिलिङसहित काठमाडौं, ललितपुर र भक्त...
४० नेताको खानपान : पूर्वप्रधानमन्त्री चन्ददेखि सांसद नविना लामासम्म access_timeपुस १४, २०७५
भनिन्छ, ‘गेट सफा रहे पेट सफा हुन्छ ।’ पेट सफा मानिस स्वस्थ हुन्छ । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो सम्पत्ति अरू हुनै सक्दैन । यो भनाइसँग असहमत हुने सायदै भेटिएलान् । आफू स्वस्थ रहन राजनीतिक नेताले के खाँदा हुन् ? सर्वसाधारणलाई जिज्ञासा लाग्नु अस्वाभाविक होइन । प्रस्तु...
वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको जीवन : पत्रकारले दोहोरो मान्यता राख्न पाइँदैन access_timeपुस ७, २०७५
‘मेडिकल साइन्स’ पढ्न भारत पुगेका युवराज घिमिरे पत्रकारितामा डोरिए । वरिष्ठ पत्रकार घिमिरेले इन्डिया टुडेमा काम गरे । लन्डन बसेर दुई वर्ष बीबीसीमा आफ्नो कौशल देखाए । स्वदेश फर्केर कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरे । ३५ वर्षदेखि ‘फुलटाइम ...
साकेला : सामूहिक पहिचान जोडिएको चाड access_timeपुस ७, २०७५
हिजोआज पहिचानको कुरा धेरै सुन्न पाइन्छन् । पहिचानकै कुरा गर्ने हो भने साकेला ठोस पहिचानको आधार हो । यसले सबै किरात राईलाई पहिचानमात्र नभएर राजनीतिक तहमा समेत एकताबद्ध गरेर राखेको छ । त्यसो हुँदा यसले राजनीतिक रूपमा पनि एउटा राष्ट्रियता प्रदान गर्छ । राष्ट्रियता र र...
हलो जोत्दा जरिवाना access_timeपुस ४, २०७५
पथरैया–६ भगरैया कैलालीकी बेलारी चौधरीलाई हलो जोतेको अभियोगमा एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर माफी माग्न लगाइएको थियो । श्रीमान् आँखा नदेख्ने, छोरा सानै भएकाले त्यतिबेला हलो जोत्न बाध्य चौधरीलाई स्थानीय महिला समूहले हप्काइ–दप्काइ गरी २ हजार रुपैयाँ सजाय सु...
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको जीवन : अब कसैले अनुरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री बन्दिनँ access_timeमंसिर २९, २०७५
पंक्तिकार चन्दनिवास लोकन्थली भक्तपुर पुगेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द घरको आँगनमा ओर्ले । भेटघाटको अभीष्ट सुनाएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले भने, ‘म त अन्य काममा पो आउनुभएको होला भन्ठानेको थिएँ । मिडियाका लागि म नबोलौं ।’ अघिल्लो दिन टेलिफोन ग...
१ लाख कोसा केरा बेच्ने कार्कीको लक्ष्य access_timeमंसिर २७, २०७५
खोटाङ । बाहुनीडाँडा, कदुवा (खोटाङ) का फौदसिं कार्कीले १८ महिनाअघि पाँच सय बोट केरा रोपेका थिए । हिजोआज कार्कीको केरा बगानमा दैनिक एक सयदेखि डेढ सय कोसा केरा पाकिरहेका हुन्छन् । लसी व्यापारीसमेत रहेका उनले त्यही केराबाट लसी बनाएर बेच्ने गरेका छन् । दुई...
‘प्रधानमन्त्री भएको पहिलो रात निद्रा लागेन’ access_timeमंसिर २५, २०७५
सपना ठूलै देख्नुपर्छ भन्ने नेपाली उखान प्रचलित छ । तर, उनले देखेको सपना न ठूलो थियो न त महत्वाकांक्षी नै । वकिल बन्ने सपना देखेका उनले वकालतका लागि ‘लाइसेन्स’ लिएरै छाडे । ‘लाइसेन्स’ लिएरमात्रै भएन । वकिल बन्न पञ्चायतको सदस्य बन्नुपर्ने बाध्यता...
नायिका आशिका तामाङको जीवन : उनलाई त्यस्तो मन पर्दैनथ्यो, सम्बन्ध टुट्यो access_timeमंसिर २२, २०७५
‘मैले कमाएको एक–एक युरो भविष्यमा नेपालकै लागि खर्चिनेछु,’ नायिका आशिका तामाङले सुनाइन्, ‘जर्मनीमै रहे पनि भविष्य नेपालमै खोज्ने हो ।’ सन् २०११ देखि जर्मनीमा स्टाफ नर्सको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी नायिका तामाङले अहिलेसम्म त्यहाँको रातो प...
डोल्पाली शिक्षकका दुःख access_timeमंसिर २०, २०७५
दुःखले मानिसलाई स्पातजस्तो बनाउँछ भन्ने गरिन्छ । सबै सन्दर्भमा सही होला कि नहोला । दुःखले दुःख दिएपछि सबैलाई स्पातजस्तो बनाउला के ? तर, सदुपयोग गर्न जाने दुःखले मानिसलाई सवक सिकाउँछ । सिकाएकै हुन्छ । दुःखले दुःखमात्रै होइन सुखको वहार पनि ल्याउँछ भन्नेको कमी छैन ।&n...
पत्रमित्रताले जुराएको जोडी access_timeकात्तिक १०, २०७४
घाम घर फर्कंदै थियो । अपराह्न पाँच बजेसम्म मोरङको बेलबारी बसेपछि उनले उनलाई साइकलमा राखेर घर पुर्याए । बेलबारीबाट घर (हरैंचा) पुग्दा घरपरिवारले खाना खाँदै थिए । उनी साइकलबाट ओर्लनासाथ उनको कोठा पसिन् । खाना खाइसकेपछि दुवैलाई खाना खान बोलाइयो । खान...
नारायण गोपालले गरेको अन्तिम ट्युनिङमा गीत लेख्न पाउने भाग्यमानी गीतकार access_timeसाउन ६, २०७४
दुर्लभ अवसर । त्यही अवसर गीतकार विष्णुबावु देवकोटाले पाएका थिए । नारायण गोपालको निधन भएको २७ वर्ष भइसकेको छ । तर, उनले गरेको ट्युनिङ २६ वर्षपछि फेलापरेको थियो । त्यही ट्युनिङमा संगीतमा गीतकार देवकोटाले गीत लेख्ने अवसर पाएका थिए । नेपाल कला संस्कृति वि...
सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ लेख्दा केन्द्रीय सदस्य चट् access_timeमंसिर १८, २०७५
संगठनले कारबाही गरेपछि धाक–धम्की दिनेको कमी थिएन । ललाइ–फकाइ गर्दै भेटौं न भन्ने दर्शना नेपालीहरूजस्ता त्यत्तिकै थिए । कुट्नका लागि बनाइएका योजना चुहिएपछि उनी बालबाल बचिन् । अचाक्ली भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ‘डिएक्टिभ’ गरेर उनी तीन दिन...
ब्रिटिस आर्मी भविन्द्र राईको जीवन : किताबमा मात्रै मासिक २० हजार खर्च access_timeमंसिर १५, २०७५
‘बेलायतमा रहे पनि नेपालकै सपना देख्छु,’ ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत सार्जन्ट भविन्द्र राईले सुनाए, ‘नेपाल नै सम्झिरहेको हुन्छु । नेपाललाई बिर्सन सकिँदैन ।’ ‘आर्मी करिअर’ मा संसार घुमेका उनको मान्यता छ, ‘नेपाललाई नेपालज...
६ देखि ६५ वर्षका १२ सय क्यानेडियनलाई तेक्वान्दो सिकाउँदै नेपाली access_timeमंसिर १३, २०७५
बाक्सिला, खोटाङका राजकुमार राई बेलायती सेनामा भर्ती भए । सन् १९८० मा भर्ती हुँदा राई १९ वर्षका थिए । भर्ती भएपछि उनले तेक्वान्दो खेल्न सुरु गरे । बेलायती सेनामा १५ वर्ष सेवा गरेका उनले पल्टनमा रहँदा सक्रियपूर्वक तेक्वान्दो खेले । भूतपूर्व गोरखा सैनिक राई भर्ती...
सहसचिव प्रकाश दाहालको जीवन : ‘सहसचिव भएपछि शनिबार बिदा बसेको सम्झना छैन’ access_timeमंसिर ८, २०७५
‘सबै नेपालीलाई दुई छाक खान पुगोस्,’ सहसचिव प्रकाश दाहालले सुनाए, ‘दुई छाक खानका लागि स्वेशमै रोजगारी पाइयोस् ।’ ४३ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । ‘त्यस्तो अवस्था अन्त्य भएको नेपालको परिकल्पना गरेको छु,’ सहसचिव दाहालले उत्साह...
होसियार ! पैसाबाट छालारोग सर्छ access_timeमंसिर ७, २०७५
स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोज्नु मानवीय स्वभाव हो । मानिसले जानाजान स्वास्थ्य बिगार्न चाहँदैन । उसले सकेसम्म स्वास्थ्य ठीकठाक राख्न खोज्छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोजे पनि दैनिकजसो गर्ने सानातिना असावधानीले उसलाई गम्भीर समस्याले सताउँछ । वस्तु विनिमयका लागि दैनिकजसो प्...
प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्नसाथ आफैं सफा हुने शौचालय access_timeमंसिर १, २०७५
‘शौचालय नहुनु समस्या होइन,’ रवीन्द्र शाहीले दाबी गरे, ‘भएका शौचालय सफा नहुनु मुख्य समस्या हो । शौचालय नहुनु समस्या हुन्थ्यो भने त जत्ति पनि बनाइन्थ्यो ।’ सार्वजनिक शौचालयको समस्या नयाँ होइन । एसिया महादेशमै शौचालय समस्या चर्को छ । चीन...
युवा संघ नेपाल अध्यक्ष रमेश पौडेलको जीवन : भाग्य, विधाताभन्दा कर्मदातामा विश्वास access_timeमंसिर १, २०७५
‘कर्ममा विश्वास गर्छु,’ युवा संघ नेपाल अध्यक्ष रमेश पौडेलले सुनाए, ‘कर्मलाई धर्म मान्ने र भौतिकवादी दर्शन आत्मसात् गरेकाले भाग्य, विधाताभन्दा दातामा विश्वास गर्छु ।’ युवा संघ नेपाल अध्यक्ष पौडेलका घरभित्रै पुरेत, पण्डितहरू छन् । उनीहरूका अनु...
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको जीवन : एक पेग खाएपछि निद्रा लागिहाल्छ access_timeकात्तिक २४, २०७५
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी १०० वर्ष टेक्दै छन् । जोशी संवत् २०७६ वैशाख ३० गते सय वर्ष पुग्दै छन् । सय वर्षमा हिँड्दै गरेका उनी स्वस्थ छन् । मानिस कसरी स्वस्थ रहन सकिएला ? ‘चिन्तन मनन गर्ने,’ उनको तर्क छ, ‘तर, चिन्ता गर्नुहुँदैन । त्यसो मात्रै गर्न सके...
किन व्यावहारिक हुन सकेन नेपाल संवत् ? access_timeकात्तिक २२, २०७५
नेपाल संवत् सुरु भएको ११३९ वर्ष भएको छ । म्हपूजा र नेपाल संवत् एकै दिन पर्छ । ‘नयाँ संवत् भित्र्याएर म्हपूजा गर्ने चलन चलाइएको छ,’ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले दाबी गरे, ‘नेपाल संवत् ११३९ मात्रै भयो । म्हपूजा ११३९ वर्षदेखि मात्रै गर्न थालिएको होइन । ...
म्हपूजाको महत्व : आफूले आफैंलाई चिन्ने अवसर access_timeकात्तिक २२, २०७५
‘थःतः थःम्ह म्हमसिया अति दुःख सिल रे,’ नेवारी भाषाको प्रचलित गीत गाएपछि संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले नेपालीमा अथ्र्याए, ‘आफूले आफैंलाई नचिनेर अति दुःख पाइयो रे ।’ म्हपूजाको पृष्ठभूमि सोध्नासाथ संस्कृतिविद् जोशीले उल्लिखित नेवारी गीत सुनाए ।&n...
काग कथा : कागको दादागिरी अलि चर्को छ access_timeकात्तिक १९, २०७५
काग चरा प्रजातिमध्येका बाठो पन्छी । ‘म सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जाँदै थिएँ । २५ वर्षअघिको कुरा हो । पाङ्बोचेबाट फेरिचे जाँदै थिएँ । मसँग प्याक लन्च थियो । विदेशी साथीहरू पनि सँगै थिए । दुई–तीनवटा कालो काग आए । मैले बिस्कुट फ्याँकिदिएँ,&rsq...
चर्मरोग विशेषज्ञ ललन खतिवडाको जीवन : चर्को भाषण गरेको भन्दै दुर्व्यवहार गर्न खोजियो access_timeकात्तिक १७, २०७५
‘प्रत्येक नेपालीले दुई छाक खान पाऊन्,’ चर्मरोग विशेषज्ञ ललन खतिवडाले भने, ‘उपचार नपाएर कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् । यति देख्न सुन्न पाए कति जाती हुन्थ्यो । मैले परिकल्पना गरेको नेपाल त्यति भए पुग्छ ।’ म भोकै छु भनेको सुन्न नपरोस्...
३९ राजनीतिक नेताको ‘फिटनेस’ शैली access_timeकात्तिक १६, २०७५
भनिन्छ, ‘स्वास्थ्यभन्दा ठूलो सम्पत्ति अरू हुनै सक्दैन ।’ यो भनाइसँग असहमत हुने सायदै भेटिएलान् । आफू स्वस्थ रहन जोकोहीले केही न केही गरिरहेका हुन्छन् । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम हुन्छ भन्ने उखान छ । रोग लाग्न नदिन र लागिसकेका नेताले आफूलाई स्वस्थ रा...